कुकुरहरु को लागी सीढीहरु, यी मोडेलहरु संग हिप बाट पीडा बाट बच्न कुकुरहरुको संसार
सुसाना Godoy | 05/10/2021 15:11 | कुकुरका सामानहरू
सीढी एक आवश्यक सामान हो कि हामी हाम्रो जीवन मा छ। माथि र तल भुइँ वा विभिन्न ऊँचाईहरु को लागी उनीहरु साँच्चै आवश्यक छन् गर्न सक्षम हुन। त्यसोभए यदि हामी पशु संसारमा जान्छौं, कुकुर सीढीहरु उनीहरुलाई पछाडि छोड्न सकिएन। उनीहरु पनि आफ्नो जीवन को हिस्सा हो, विशेष गरी केहि धेरै विशिष्ट क्षणहरुमा।
त्यसोभए, तपाइँलाई थाहा छ कि के सबैभन्दा सामान्य लाभ कि उनीहरु हामीलाई कुकुरहरु को लागी सीढीहरु को उपयोग को रूप मा हामी उनीहरुलाई दिनेछौं र जब उनीहरु लाई पूरै सिफारिश गरीन्छ भनेर प्रस्ताव गर्न जाँदैछन्। यो सबै र धेरै धेरै, सधैं हाम्रो घरपालुवा जनावरहरु को आराम को बारे मा सोच्दै, जो वास्तव मा हाम्रो लागी महत्वपूर्ण छ। के तपाइँसँग तपाइँको छ?
dibea सीढीहरु द्वारा lionto ...
HXX कुकुर सीढीहरु ...
Holtaz कुकुर र्‍याम्प ...
डेक सीढीहरु को लागी ...
PetSafe तह सीढी ...
Pawhut भर्याङ को लागी ...
1 किन एक कुकुर सीढी को उपयोग सुविधाजनक छ
2 एक कुकुर सीढी को उपयोग को लाभ
3 एक कुकुर सीढी को लागी सबै भन्दा साधारण उपयोग
3.1 ओछ्यान वा सोफा मा जानुहोस्
3.2 गाडीमा चढ्नुहोस्
3.3 पोखरी बाट बाहिर जानुहोस्
4 कुकुर सीढी छनौट गर्दा के हेर्न को लागी
5 कुकुर नस्लहरु जसमा यो सीढीहरु को उपयोग गर्न को लागी सल्लाह दीन्छ
6 कुकुर र्‍याम्प वा सीढी? कुन विकल्प राम्रो छ?
7 जहाँ एक सस्ता कुकुर सीढी किन्न
किन एक कुकुर सीढी को उपयोग सुविधाजनक छ
ठिक छ, यो एक धेरै सरल जवाफ हो, किनकि त्यहाँ धेरै जनावरहरु छन् कि सबै दिन ओछ्यान देखि सोफा सम्म छन्, कूदहरु कि लामो समय सम्म आफ्नो स्वास्थ्य को लागी हानिकारक हुन सक्छ। केहि नस्लहरु एक साँच्चै नाजुक रीढ़ छ, जो केहि समस्याहरु वा विभिन्न रोगहरु को लागी नेतृत्व गर्दछ। उल्लेख छैन कि जोड़हरु पनि प्रत्येक जम्प बाट ग्रस्त छन्। तेसैले, यो आवश्यक छ एक मद्दत र विशेष गरी जब जनावर बूढो हुँदैछ। त्यसोभए, अब तपाइँ जान्दछन् कि यो आधारभूत सामानहरु मध्ये एक हो कि तपाइँ तपाइँको जीवन मा र तपाइँको प्यारो को कि मा आवश्यक छ।
एक कुकुर सीढी को उपयोग को लाभ
पछाडि दुखाइ रोक्छ.
यो जनावरहरु लाई पछाडि र पछाडि उफ्रन बाट रोक्न को लागी जब उनीहरु आराम गर्न चाहन्छन्।
प्रत्येक जम्प संग उनीहरु आफ्नो जोडा हानि गर्न सक्छन्, जसको साथ, कुकुर सीढी रक्षा र उनीहरुको हेरचाह हुनेछ।
उस्तै तरीकाले यो पनि को एक हो हड्डी को हेरचाह गर्न को लागी राम्रो तरिका, किनकि उनीहरु अर्को व्यक्तिहरु हुन् कि धेरै जम्प बाट ग्रस्त छन्, अधिक छिटो भंग गर्न को लागी सक्षम छन्।
के तपाइँ जान्नुहुन्छ कि धेरै चोटहरु यस जस्तै एक पूरक संग बच्न सकिन्छ?
तपाईंको जीवनको गुणस्तर सुधार गर्नुहोस् किनभने कुकुर सीढी संग हामी तपाइँको प्रयास घटाउनेछौं।
एक कुकुर सीढी को लागी सबै भन्दा साधारण उपयोग
ओछ्यान वा सोफा मा जानुहोस्
कुकुरहरु संग छ कि सबै भन्दा ingrained परम्पराहरु मध्ये एक हो दुबै ओछ्यान र सोफा मा प्राप्त गर्न सक्षम। यदि हामी त्यहाँ छौं, उनीहरु दौडिन्छन् र कहिलेकाहीँ, हामी त्यहाँ नहुँदा पनि, उनीहरुलाई थाहा छ कि उनीहरुको त्यो क्षेत्रमा एक ठाउँ छ। तर तपाइँ के गर्न जाँदै हुनुहुन्छ एक दिनचर्या हो, जुन हामीले उल्लेख गरेका छौं तपाइँको शरीर को लागी राम्रो हुने छैन। तेसैले, हामी तपाइँलाई सही बाटो देखाउन एक सीढी राख्नेछौं। यो साँचो हो कि उनीहरु रातारात जान्दैनन्, तर उनीहरु थोरै धैर्यता संग यसो गर्नेछन्। जब उनीहरुलाई यो बानी पर्छ, उनीहरु मात्र सीढी को उपयोग गर्दछन्!
अर्को बानी जुन हामी हाम्रा जनावरहरुमा हरेक दिन देख्छौं कारमा पस्दै छ। जब उनीहरु धेरै फुर्तीला हुन्छन्, उनीहरु यो देख्न सक्दैनन् तर बिस्तारै बिस्तारै यो धेरै जम्प मा उनीहरुको टोल लिन सक्छ। तेसैले त्यहाँ सीढीहरु पनि खेल मा आउँछन्। तिनीहरू माथि र तल जान को लागी सही छन् जब हामी उनीहरु संग एक पैदल यात्रा को लागी जान्छौं। तपाइँलाई तपाइँको शरीर मा तनाव बिना सही कदम चाल्ने मद्दत। साथै, चिन्ता नगर्नुहोस् यदि उनीहरु फोहोर हुन्छन् किनकि ती मध्ये धेरै जसो सफा गर्न सजिलो छ।
पोखरी बाट बाहिर जानुहोस्
यदि उनीहरु पोखरी मा पौडी खेल्न मन पराउँछन्, उनीहरु थोरै व्यायाम गर्दा आराम गर्न को लागी सक्षम हुनेछन् र यो उनीहरु को साथ साथै हामी संग हुन्छ। तर नुहाए पछि, बाहिर निस्कन अलि जटिल हुन सक्छ र यसैले, हामीलाई केहि सीढीहरु मा मद्दत जस्तै केहि छैन। उनीहरुसंग उनीहरुको पाइला छोटो हुनेछ र पनि, उनीहरु एउटै प्रयास गर्न को लागी छैन। तेसैले, ती सबै फाइदाहरु लाई विचार गर्न को लागी छन्!
कुकुर सीढी छनौट गर्दा के हेर्न को लागी
चरणहरु को संख्या: हामी सान्त्वना नायक बनाउन चाहन्छौं जब यो कहीं पनी र बन्द गर्न को लागी आउँछ। तेसैले, कुकुर सीढी धेरै चरणहरु हुन सक्छ। केहि केवल दुई फराकिलो चरणहरु हुन सक्छ, तर धेरै अरु संग तीन वा चार भन्दा धेरै छन्। तेसैले, यो महत्वपूर्ण छ कि उनीहरु धेरै उच्च छन् र यदि हामी मात्र दुई चरण को विकल्प छान्नुहोस्, कि उनीहरु संग छन् नरम र आरामदायक सामग्री र समाप्त। तब मात्र तपाइँ प्रत्येक जम्प कुशन गर्न सक्नुहुन्छ।
चरण उचाइ: हामीले यो उल्लेख गरेका छौं र एक पटक फेरि हामी त्यो टिप्पणी सबै भन्दा राम्रो कुरा यो हो कि उनीहरु धेरै उचाई छैन र यदि त्यहाँ अधिक चरणहरु छन्। विशेष गरी साना कुकुरहरु वा ती जो पहिले नै रोग को केहि प्रकार छ को लागी। यस तरीका बाट कूद उनिहरु लाई धेरै राम्रो ले, तपाइँको शरीर को लागी यति धेरै नतिजा बिना।
चरण चौडाई: उस्तै तरीका मा चरणहरु को संख्या को सन्दर्भ मा, हामी पनी उनीहरु को विभिन्न चौडाइहरु खोज्न सामना गर्न सक्छौं। सान्त्वना चौडा मा उपस्थित छ, तर यो सधैं यो तरीका हुन सक्दैन, एक मध्यम आकार संग उनीहरु पनि हाम्रो घरपालुवा जनावर आराम संग सार्न को लागी अनुमति हुनेछ।
पेन्डि:: यो सधैं मा निर्भर हुनेछ सीढीहरु को आकार आफै। त्यसोभए कहिलेकाँही हामी पाउन सक्छौं कि एक अर्को भन्दा धेरै पेन्डि छ। तर साँच्चै यदि उनीहरुसंग धेरै चरणहरु छन्, परिवर्तन शायद ही देखीनेछ। सब भन्दा राम्रो कुरा यो हो कि यो धेरै ठाडो छैन र यो मात्र हाम्रो घरपालुवा जनावरहरुलाई आराम प्रदान गर्दछ।
यदि तिनीहरू foldable छन्: हामी संग छ तह मानिसहरु छनौट गर्न को लागी विकल्प। तिनीहरूको ठूलो फाइदा यो हो कि हामी उनीहरुलाई मात्र राख्न सक्छौं जब हामी उनीहरुलाई प्रयोग गर्न जाँदैछौं। अन्यथा, उनीहरु धेरै थोरै ठाउँ लिन्छन् र हामी उनीहरुलाई कुनै पनी कुनामा वा ओछ्यान मुनि भण्डार गर्नेछौं। तेसैले कि उनीहरु कुनै पनी बाटो मा पाउँदैनन् जब घरपालुवा जनावरहरु अब उनीहरुलाई प्रयोग गर्दैनन्।
सामाग्री: काठ यी मामिलाहरुमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने सामग्री मध्ये एक हो। तर यो एक अलि बढी सहज बनाउन को लागी, यो हुन सक्छ मेष लाइन वा मखमली कभर संग, जसले यसको स्पर्श धेरै चिकनी बनाउँछ। निस्सन्देह, सधैं विरोधी पर्ची कदम संग र जसको आवरण तपाइँ आराम संग धोउन सक्नुहुन्छ। निस्सन्देह, अर्कोतर्फ, तपाइँसँग प्लास्टिक संरचनाहरु, हल्का र समान रूप देखि प्रतिरोधी छ।
कुकुर नस्लहरु जसमा यो सीढीहरु को उपयोग गर्न को लागी सल्लाह दीन्छ
मोटो रूपमा बोल्दै, माथि र तल सीढीहरु जाँदै कुनै कुकुर को लागी सिफारिश गरीएको छैन। तर यो सत्य हो कि त्यहाँ सधैं अपवाद हुनेछ। यस अवस्थामा, हामी भन्न सक्छौं कि सबै नस्लहरु छोटो खुट्टा र एक लम्बी शरीर बाट बनेको हो कि हरेक दिन यो पूरक को आवश्यकता हुनेछ। किनकी केहि मनपर्छ dachshunds वा dachshunds, bassets वा यहाँ सम्म कि corgi काफी कमजोर छन् र यो एक हिप समस्या ट्रिगर गर्न सक्छ, हड्डी र जोर्नी को।
पक्कै पनि दौड जस्तै ल्याब्राडोर वा जर्मन शेफर्ड कूल्हे बाट पीडित हुन सक्छ तर उही तरीका बाट रीढ़ बाट। किनभने जब जम्पिंग यो संकुचित छ र यो भन्दा बढी लोड गर्न को लागी जाँदैछ। पुराना उनीहरु, नराम्रो, तर यो साँचो हो कि लगभग4महिना सम्म कुकुरहरु लाई पनि मद्दत चाहिन्छ। हरेक सावधानी हाम्रो घरपालुवा जनावरहरु को लागी राम्रो छ!
कुकुर र्‍याम्प वा सीढी? कुन विकल्प राम्रो छ?
यो शाश्वत प्रश्न हो, किनकि यसमा तपाइँ सधैं एक राम्रो छनौट गर्न को लागी धेरै गुणहरु दिनु पर्छ। सब भन्दा पहिले, उचाई र क्षेत्र जहाँ यो राखिएको छ तौल, यो सोफा हो वा ओछ्यान हो र यदि दुबै विकल्प को लागी पर्याप्त ठाउँ छ। निस्सन्देह, अर्कोतर्फ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मध्ये एक हो कि, यदि यो रोकथाम को लागी हो, तब सीढीहरु तपाइँको छेउमा छन्। तर यदि तपाइँको कुकुर कुनै रोग वा शारीरिक समस्या छ भने र्‍याम्प राम्रो छ ताकि यो बल नदिनुहोस्।
उस्तै तरीकाले, यदि यो छोटो खुट्टाको कुकुर हो, जस्तै हामीले उल्लेख गरेका छौं, र्‍याम्प पनि तपाइँको सबैभन्दा राम्रो सहयोगी हुन सक्छ। यदि हामी देख्छौं कि तपाइँ केहि कर्ब मा चढ्न सक्नुहुन्छ जब हामी सडक तल जान्छौं, तब तपाइँ सीढी को लागी अप्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी तपाइँ देख्नुहुन्छ, हामी सधैं हाम्रो जनावरहरु को महान आराम र यदि उनीहरु लाई उनीहरुको सीमाहरु को बारे मा सोच्नु पर्छ.
जहाँ एक सस्ता कुकुर सीढी किन्न
अमेजन: यो कसरी कम हुन सक्छ, अमेजन सँधै तपाइँलाई चाहिने सबै चीज छ र यस मामला मा यो पछाडि छोडिएको थिएन। यस कारण को लागी, कुकुरहरु को लागी सीढीहरु को बीच यो फरक र फिनिश र सामाग्री संग, तह र हटाउन सकिने विचारहरु संग हामीलाई आश्चर्य। तर सधैं गैर पर्ची समाप्त संग।
किवोको: Kiwoko स्टोर कुकुरहरु र अधिक को लागी सीढीहरु को लागी प्रतिबद्ध छ, जसको लागी उनीहरु लाई तीन चरणहरु संग प्रस्तुत गरीएको छ, किनकि उनीहरु हाम्रो घरपालुवा जनावरहरु लाई अझ धेरै राम्रो संग मद्दत गर्न को लागी प्रबन्ध गर्छन्। पंक्तिबद्ध हुनाले तपाइँ अधिक आराम, सुरक्षा र कोमलता पाउनुहुनेछ।
टेन्डेनिमल: सस्तो विकल्पहरु पनि यो पसल मा पाईन्छ, उनीहरु लाई पनी प्लास्टिक वा लाइन मा फरक फिनिश छ, जो सधैं कुकुरहरु को लागी सीढी को मामला मा सबै भन्दा राम्रो छनौट गर्न मद्दत गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: कुकुर संसार » सामान्य कुकुरहरु » कुकुरका सामानहरू » कुकुर सीढीहरु